Mogadishu Journal » Qaraxyo iyo is-rasaaseyn ay dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Wajeer ee gobolka W/bari Kenya
Qaraxyo iyo is-rasaaseyn ay dad ku dhinteen oo ka dhacay degmada Wajeer ee gobolka W/bari Kenya
Mjournal : — Wararkan naga soo gaaraya gobolka W/bari dalka Kenya gaar ahaa degmada Wajeer ayaa sheegaya xalay fiidkii Bambaano lagu weeraray goob qaadka lagu iibiyo ayna ku yaallaan makhaayado lagu shaaho, ka dibna ay xigtay rasaas lala beegsaday dadkii goobtaasi ku sugnaa.
Illaa hadda waxaa la xaqiijiyaa dhimashada nin oday ah oo Soomaali ah iyo dhaawaca illaa 9 ruux kuwaasoo loola cararay isbitaalka magaalada Wajeer.
Markii uu weerarku dhacay kadib waxaa goobta si deg deg ah u gaaray ciidamada booliiska gobolka W/bari dalka Kenya, iyadoo kooxihii weerarkaasi geystay goobta ka baxsadeen.
Wararku waxaa ay sheegayaan in dadka dhaawacu soo gaaray qaarkood xaaladoodu tahay mid aad u culus kadib markii ay haleeshay rasaasta, waxaana dadka ay isugu jiraan Soomaaloda ku nool gobolkaWaqooyi Bari ee Kenya iyo dad u dhashay Kenya.
Weerarka xalay ka dhacay degmada Wajeer ayaa imanaya sadex cisho kadib markii weerar ay mas’uuliyadiisa sheegatay xarakada Al Shabaab ay kudhinteen illaa 8 askari oo booliska wadanka Kenya ka mid ah kuwaasi oo xilli baabuur ay ku marayeen meel u dhow magaalada Libooye la weeraray.
Dadka ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa ka walaacsan amaanka magaalooyinka oo si aad ah u sii xumaanaua ayna ka dhacaan weeraro iyo qaraxyo nafaf badan sababsadaan.
Dagaal maalintii labaad ka soconaya deegaanno hoostaga gobolka Sh/hoose
C/wali Gaas ‘’ra’iisal wasaaraha cusub waa shaqsi aan aad u karanayo oo wax badan qaban kara